Ekwensu Ọ̀ Dị Adị n’Eziokwu? | Ajụjụ ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kyangonde Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ekwensu Ọ̀ Dị Adị n’Eziokwu?
Ee, Ekwensu dị adị. Ọ bụ ya “na-achị ụwa.” Ọ bụbu mmụọ ozi, ma o mechara nupụrụ Chineke isi. (Jọn 14:30; Ndị Efesọs 6:11, 12) O nwere aha ndị Baịbụl kpọrọ ya iji mee ka anyị mata ụdị onye ọ bụ. Aha ndị a bụ:
Setan, nke pụtara “Onye Mmegide.”—Job 1:6.
Ekwensu, nke pụtara “Onye Nkwutọ” n’asụsụ Grik.—Mkpughe 12:9.
Agwọ, nke pụtara “Onye Nduhie” n’ọtụtụ ebe na Baịbụl.—2 Ndị Kọrịnt 11:3.
Onye Ọnwụnwa.—Matiu 4:3.
Onye Ụgha.—Jọn 8:44.
Ekwensu abụghị mmadụ ma ọ bụ ihe ọjọọ dị n’ime mmadụ
O nwere ndị na-asị na mmadụ bụ Ekwensu ma ọ̀ bụkwanụ na Ekwensu bụ ihe ọjọọ dị n’ime mmadụ. Ma, o nwere mgbe Ekwensu na Chineke kwurịtara okwu. Ebe ha nọ kwurịta okwu ahụ bụ n’eluigwe. N’ihi ya, ọ bụghị mmadụ ka ya na Chineke kwurịtara okwu ahụ, kama, ọ bụ otu mmụọ e kere eke. (Job 2:1-6) O nwekwara mgbe Ekwensu na Jizọs kwurịtara okwu. (Matiu 4:8-10) Ihe ndị a na-egosi na Baịbụl na-ekwu na Ekwensu bụ onye dị adị, ọ bụghị ihe ọjọọ dị n’ime mmadụ.
Ò kwesịrị iju anyị anya na ọtụtụ ndị ekweghị na Ekwensu dị adị? Mba, n’ihi na Baịbụl kwuru na Ekwensu na-eji aghụghọ eduhie ndị mmadụ. (2 Tesalonaịka 2:9, 10) Otu n’ime aghụghọ ya kachanụ bụ na ọ na-eme ka uche ndị mmadụ kpuo ìsì, ka ha ghara ịma na ọ dị adị.—2 Ndị Kọrịnt 4:4.
Ihe ndị ọzọ na-abụghị eziokwu ndị mmadụ na-ekwu gbasara Ekwensu
Ụgha: Aha ọzọ a na-akpọ Ekwensu bụ Lusifa.
Eziokwu: Okwu Hibru a sụgharịrị ka ọ bụrụ “Lusifa” na Baịbụl ụfọdụ pụtara “onye na-enwu dị ka ìhè.” (Aịzaya 14:12) Ihe ndị ọzọ e kwuru n’Aịzaya isi iri na anọ gosiri na ọ bụghị Ekwensu ka a kpọrọ Lusifa, kama ọ bụ ndị eze Babịlọn, bụ́ ndị Chineke ga-emenye ihere n’ihi na ha dị mpako. (Aịzaya 14:4, 13-20) E ji okwu a bụ́ “onye na-enwu dị ka ìhè” kwaa ọchịchị Babịlọn emo mgbe o mechara daa.
Ụgha: Chineke ji Ekwensu kwara ngwa ọrụ o ji anwa ndị mmadụ ọnwụnwa.
Eziokwu: Ekwensu bụ onye iro Chineke, ọ bụghị onye ozi Chineke. Ekwensu na-emegide ndị Chineke ma na-ebo ha ebubo.—1 Pita 5:8; Mkpughe 12:10.
E nwere ihe anọ Chineke nyere gị ga-eme ka Setan ghara ịnwata gị.
I nwere ike ịna-eche ihe mere nsogbu ji ju ebe niile n’ụwa a. Baịbụl kwuru na Chineke ga-ewepụrụ anyị ahụhụ, ọrịa, na ọnwụ n’oge na-adịghị anya.